The doro bụ ihe kasị Ugboro njehie na-chere ihu onye ọrụ na mmekọrita Windows Media Player na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà Filiks na-etinyere-esi nke nke n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na e dere na nke a bụkwa a ga-agbaso ma na-agụ na zuru mere na nke na-abụghị nanị kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi ihe kasị mma nke na atụmatụ nke mgbasa ozi ọkpụkpọ.
Part 1: 3 ikpe nke "Windows Media Player nsogbu na-egwu egwu faịlụ."
Part 2: 3 Solutions dozie nsogbu na-egwu egwu faịlụ
The ikpe na-kwuru ebe a bụ ndị na-nwere otu ngwọta na URL si ebe okwu ikpe ndị a na-ahọrọ na-ekwu okwu ya na-eme n'ọdịnihu onye ọrụ nwekwara ike ịga na mkpa forums maka ihe ọ bụla ọzọ mmelite:
URL: Download ugbu a
Original aha: nchọpụta nsogbu
Media ọkpụkpọ na internet ụda malfunction. Error ozi agụ, sị: Windows Media Player nsogbu na-egwu egwu faịlụ. M na-na-ahụ red X ọzọ m mp3 faịlụ mgbe m na-agbali na-egwu. M ka nwere ụda na m pc ezie na.
Windows Media Player-ekwu na ọ "nsogbu na-egwu egwu faịlụ". A na-eme na bụla faịlụ m na-agbalị, ma mp3, WAV, wma. All faịlụ na-na Obodo ike mbanye.
Nke a bụ a pụtara ọhụrụ Win 8.1 64 bit wụnye, na WMP version 12.0.9600.17031. M na na na mgbe ọ na-ikpeazụ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ n'ime ikpeazụ izu. Ọ bụla echiche?
M nwere ezumike nkiri mkpachị weere na m Panasonic camcorder. M nwere mbipụta na ma na desktọọpụ PC na laptọọpụ. The faịlụ eji na-egwu ok na ma pc si ma agaghị now na na na m desktọọpụ ọzọ. M gbalịrị edegharị ndị na-egwu ok on laptọọpụ azụ ka pc Ma, nsogbu ka dị taa. M nwekwara ike imeghe faịlụ na desktọọpụ pc iji Nero ngwa ngwa media onyenlereanya ma mgbe m agbalị na-emeghe na Windows Media Player m ga-esi njehie ozi na mkparịta ụka dị igbe sị "Windows Media Player nsogbu na-egwu egwu faịlụ." Echere m m ga-iwepụ WMP na re-wụnye ma ike ịhụ nke a dị ka otu nhọrọ na-achịkwa panel. m nri pịrị faịlụ na metụtara ha na Windows Media Player ma nke a adịghị aka. The faịlụ-egosi dị ka ụdị "Movie Clip" ( .MOD Extension) bụla ọ na aro na otú m nwere ike na-azụ na na egwu ukwuu kpọrọ ihe.
Ka e kwuru tupu nakwa na ihe ngwọta nke nke bụ nkịtị na ọdịdị na ọ bụ yiri ka Windows Media Player dị ka mma. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ na-soro mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results n'ime chaachaa nakwa ọkọkpọhi kasị mma site na iji wuru na ngwaọrụ dị ka nke a ngwọta adịghị achọ onye ọrụ iji jide n'aka na nke atọ ọzọ nrụnye na-mere ka ga-esi n'ime ihe iseokwu:
1.The onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na windows + R Nchikota na-enwe iji jide n'aka na-agba ọsọ mkparịta ụka igbe na-egosi:
2.The ahịrịokwu nke na-bụ mgbe ahụ na-mesịa bụ msdt.exe -id WindowsMediaPlayerConfigurationDiagnostic iji jide n'aka na mmezima ngwaọrụ na meghere dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
3.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na-esote button na-enwe na onye ọrụ chere maka mmezima ngwaọrụ ịchọpụta nke:
4.The onye ọrụ kwesịrị ka pịa "Mee a Idozi" iji hụ na mmezima ngwaọrụ-emetụta ihe ngwọta nke metụtara nsogbu na nwere anu achọpụtara na a ga-dozie nsogbu ahụ na zuru:
O nwekwara a aha dị ka nke mbụ ahụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Nchikota mkpebi na e kwuru na-etinyere iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na zuru na onye ọrụ a na-pacified. The ngwọta na-kwuru n'elu bụ akụkụ mbụ nke mkpokọta onu na mgbe ọ na-abịa akụkụ nke abụọ mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na codec metụtara ngwọta bụ a ga-agbaso iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ngwọta na zuru na ọ na-etinyere dị ka a nfiksi iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye-arụ ọrụ mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nfiksi na e etinyere na nke a bụ onye ahụ bụ ọkaibe na a pụrụ ịdabere ka e kwuru na ukara website. Na-esonụ bụ nzọụkwụ ndị a ga-soro na nke a:
1.The URL http://filehippo.com/download_klite_codec_pack/ bụ ka a bịa na-eme ka n'aka na download na peeji nke nke codec mkpọ na-enweta:
2.The download njikọ bụ mgbe ahụ na-pịrị na-akparịta ụka igbe eji nke onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na faịlụ ebudatara na-azọpụta:
3.The kpaliri ndị ahụ a ga-agbaso site na ịpị esote gaba n'ihu na nke a ruo mgbe echichi na-mere na nke a kwa na-ekwubi usoro na zuru ga-edozi doro njehie kpamkpam:
Ngwọta 3: tọghata video ka Windows Media Player dakọtara format
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ nanị omume ndị pụrụ ime ka n'aka na needful a mere na onye ọrụ ọkọkpọhi nke kpebiri na nke kacha nta mgbalị dị ka ọrụ niile na-eme site usoro ihe omume. Usoro a ga-soro kwuru n'okpuru ebe a:
1.The URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html bụ a ga-agbaso na-eme ka n'aka na exe faịlụ ebudatara na usoro ihe omume arụnyere:
2.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na isi interface na-eji ka ịgbakwunye faịlụ:
3.From nri n'igbe ahụ mgbasa ozi ọkpụkpọ dakọtara format a na-ahụ na-ahọrọ ka n'ihu n'ihu:
4.The tọghatara button bụ mgbe ahụ ka enwe ke akpatre nzọụkwụ:
> Resource> WMP> 3 Solutions ka Windows Media Player nsogbu na-egwu egwu faịlụ